Ny indostria fitaratra misy ny kaonty any Shina dia nirakitra ny fampandrosoana maharitra tamin'ny taon-dasa nandritra ny ezaka fanamafisana ny fanavaozana ny lafiny famatsiana, araka ny filazan'ny Ministeran'ny Indostria sy ny Teknolojia (MIIT).
Tamin'ny taona 2019 dia nahatratra 930 tapitrisa ny lanja lanjan'ny lanjan'ny lovia takelaka, nahatratra 6,6 isan-taona tamin'ny taona isan-taona, hoy ny ministera tamina fanambarana an-tserasera iray.
Mandritra ny fahatapahana dia nitatitra ny fivoaran'ny 4,4 isan-jato ary ny 7,6 isan-taona isan-taona ny fitomboan'ny vera ary ny fitaratra.
Ny vidin'ny vidin'entana amin'ny fitaratra vera dia mirefy 75,5 yuan (eo ho eo amin'ny 10,78 dolara amerikana) isaky ny tranga lanja mandritra ny vanim-potoana, dia nitombo 0.2 isan-jato tamin'ny herintaona, hoy ny fampahalalana MIIT.
Na eo aza ny fanerena ambany, ny fidiram-bolan'ny sehatra dia nitatra hatramin'ny 84.3 miliara yuan, tafakatra 9,8 isan-taona isan-taona.
Na izany aza, ny indostrian'ny lovia fitaterana dia nitatitra ny fihenan'ny tombom-barotra azo avy amin'ny varotra sy ny varotra raha ampitahaina amin'ny taona teo aloha, hoy ny ministera.
Nahatratra 1.51 miliara dolara amerikana ny sandan'ny fanondranana kapila volamena tamin'ny taona 2019, nidina 3 isan-jato isan-taona tamin'ny taon-dasa, raha toa kosa ny vidin'ny fanafarana 5,5 isan-jaton'ny dolara amerikana 3,5 lavitrisa dolara, hoy ny data momba ny MIIT.